China Factory sokajy famokarana indostrialy sy orinasa mpamokatra | Zhenyuan
Zavamaniry indostrialy: ilazana ny karazana trano rehetra ampiasaina mivantana amin'ny famokarana na ny famokarana fanohanana, ao anatin'izany ny atrikasa lehibe, tranobe fanampiana ary fotodrafitrasa fanampiny. Ny orinasa amin'ny indostria, fitaterana, varotra, fananganana, fikarohana siantifika, sekoly sy ny tarika hafa dia tafiditra ao. amin'ireo atrikasa ampiasaina amin'ny famokarana, ny zavamaniry indostrialy dia misy koa ny tranony manampy.
Ny atrikasa indostrialy dia azo zaraina ho tranobe indostrialy misy rihana sy trano indostrialy marobe arakaraka ny karazana firafiny.
Ny ankamaroan'ny tranobe indostrialy misy rihana dia hita amin'ny indostria maivana, elektronika, fitaovana, fifandraisana, fanafody ary indostria hafa. Ity karazana gorodona orinasa ity matetika dia tsy dia avo loatra, ary ny endriny jiro dia mitovy amin'ny tranon'ny laboratoara fikarohana ara-tsiansa mahazatra, ary ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa teti-pahazavana jiro mirehitra. Ireo zavamaniry famokarana amin'ny milina, metallurgy, lamba ary indostria hafa dia matetika misy rihana tokana tranobe indostrialy, ary araky ny filan'ny famokarana, ny ankamaroan'izy ireo dia zavamaniry indostrialy misy rihana marobe, izany hoe zavamaniry marindrano maromaro nilahatra nifanila. Ny elanelam-potoana tsirairay dia mety hitovy na tsy mitovy amin'ny takiana.
Ny sakan'ny (elanelam-potoana), ny halavany sy ny hahavony amin'ny fananganana orinasa tokana misy rihana dia voafaritra arakaraka ny fepetra takian'ny teknolojia amin'ny fanatanterahana ny fepetra takiana amin'ny modulus sasany. Ny halavan'ny zavamaniry B: Amin'ny ankapobeny 6, 9, 12, 15, 18, 21 , 24, 27, 30, 36m ....... Ny halavan'ny atrikasa L: metatra am-polony farafahakeliny, metatra an-jatony maro. Ny haavon'ny zava-maniry H: ny ambany dia mazàna 5 ~ 6m, ary ny avo dia mety hahatratra 30 ~ 40m, na avo kokoa aza. Ny halavany sy ny haavon'ny atrikasa no heverina fa lehibe amin'ny famolavolana jiro amin'ilay atrikasa. Ho fanampin'izany, ny fitohizan'ny famokarana indostrialy sy ny filan'ny fitaterana vokatra eo anelanelan'ny faritra, ny ankamaroan'ny zavamaniry indostrialy dia manana crane, izay afaka mampiakatra ny lanjan'ny 3 ~ 5t sy ireo vaventy taonina.
Ny famaritana ny endrika
Ny fenitra famolavolana atrikasa indostrialy dia mifototra amin'ny firafitry ny atrikasa, ary ny famolavolana atrikasa dia mamaritra ny endrika atrikasa mifanaraka amin'ny filan'ny fizotran'ny teknolojia sy ny fepetra famokarana.
Famaritana ny famolavolana zavamaniry mahazatra
1. Ny famolavolana zavamaniry indostrialy dia tsy maintsy tanterahina mifanaraka amin'ny politika mifandraika amin'izany sy ny torolàlana an'ny Fanjakana, mandroso amin'ny lafiny teknolojia, mitombina ara-toekarena, azo ampiharina azo antoka, miantoka ny kalitao ary mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fiarovana angovo sy fiarovana ny tontolo iainana.
2. Ity famaritana ity dia mihatra amin'ny famolavolana zavamaniry indostrialy vao naorina, naorina, na nitarina, fa tsy amin'ny efitrano fanadiovana biolojika misy bakteria ho toy ny zavatra mifehy. Tsy tokony hihatra amin'ny faritry ny fehezan-dalàna momba ny fisorohana ny afo, ny famindrana toerana ary ny toerana iadiana amin'ny afo. ny famolavolana zavamaniry indostrialy avo lenta sy zavamaniry indostrialy ambanin'ny tany miaraka amin'ny haavon'ny trano mihoatra ny 24 metatra.
Andininy 3 raha ampiasaina amin'ny fanovana teknolojia madio ny trano tany am-boalohany, ny famolavolana atrikasa ho an'ny indostrialy dia tsy maintsy mifototra amin'ny fepetra takiana amin'ny fizotry ny famokarana, manitsy ny fepetra arakaraka ny toe-piainana eo an-toerana, tsy hitondrana fomba hafa ary hampiasa tanteraka ireo fotodrafitrasa efa misy.
Ny famolavolana atrikasa indostrialy dia hamorona fepetra ilaina amin'ny fananganana, fametrahana, fikojakojana, fitantanana, fitiliana ary asa azo antoka.
Ny famolavolana ozinina indostrialy dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fenitra nasionaly ankehitriny sy ny masontsivana ankoatry ny fampiharana ity kaody ity.
Enina, ny orinasa indostrialy dia misy trano tsy miankina (atrikasa), ary trano mahaleo tena (efitrano fandraisam-bahiny), ny halaviran'ny trano roa dia 10 metatra, ny akaiky indrindra tsy latsaky ny 5 metatra, mba hanafoanana ny fanekena ny mahafeno fepetra .Ny tahan'ny velaran'ny tany amin'ny velaran'ny trano dia 1: 3.
Ny haavon'ny fananganana orinasa
Drafitra maodely 3D ankapobeny momba ny firafitry ny vy
Rafitra firafitry ny rindrina
Fandrafetana ny tafo
Sary momba ny haavon'ny vy 1
Sary momba ny haavon'ny vy 2
Sarin-tsarimihetsika matevina vita amin'ny vy
Previous: Villa Design
Manaraka: Fanasokajiana ho an'ny olombelona sy ny famolavolana endrika
Famolavolana firafitra vy indostrialy
Sehatra famokarana ampahany amin'ny orinasa